अमेरिकामा कर्मचारी भर्ती सुस्तायो,तलबमा भने वृद्धि – NepalayaNews.com
अमेरिकामा कर्मचारी भर्ती सुस्तायो,तलबमा भने वृद्धि
२२ भाद्र २०७६, आईतवार १५:०६
वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) । गत महीना अमेरिकी अर्थतन्त्रले अपेक्षाभन्दा कम रोजगारी सृजना गरेको छ । खुद्रा क्षेत्रमा कर्मचारी भर्ती लगातार सातौं महीना घटेपछि रोजगारी वृद्धि सुस्ताएको हो । यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग छेडेको व्यापारयुद्धको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको संकेतको रूपमा हेरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मासिक तथ्यांक अनुसार अगस्टमा अमेरिकी अर्थतन्त्रले १ लाख ३० हजार मात्रै रोजगारी सृजना गरेको छ । यो अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले गरेको जनमत सर्वेक्षणमा संलग्न अर्थशास्त्रीले बताएभन्दा कम हो । सो अवधिमा १ लाख ५८ हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान थियो । जुलाईमा भने अर्थतन्त्रले १ लाख ५९ हजार नयाँ रोजगारी सृजना गरेको बताइएको थियो । अर्थतन्त्रले जुन र जुलाईमा यसअघि बताएभन्दा २० हजार कम रोजगारी सृजना गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
तर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रोजगारी वृद्धि सुस्ताएको समाचारको खण्डन गरेका छन् । गत महीनाको रोजगारी सृजना निकै राम्रो भएको उनले बताएका छन् । चीनले अतिरिक्त महसुल खाइरहेको दाबीसमेत उनको छ । गत ३ महीनाको रोजगारी वृद्धिदर औसतमा १ लाख ५६ हजार छ । यो काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्यामा चाहिएको वृद्धिभन्दा धेरै हो । यससँगै समीक्षा अवधिमा बेरोजगारी दर ३ दशमलव ७ प्रतिशतमा यथावत् छ । सुस्त रोजगारी सृजनाका कारण पछिल्ला ३ महीनामा बेरोजगारी दर यथावत् छ ।
रोजगारी सृजना धेरैले नबढे पनि प्रतिघण्टा तलबमा भने राम्रो वृद्धि भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा अगष्टमा तलब ३ दशमलव २ प्रतिशत बढेको छ । रोजगारी सृजना नबढे पनि तलबमा भएको वृद्धिले उपभोक्ता खर्च र अर्थतन्त्रलाई बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा छ । सो अवधिमा औसत वर्कविक बढेको छ ।
यद्यपि, श्रम बजारको पछिल्लो अवस्थाले अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन केन्द्रीय बैंकले यसै महीनाको बैठकमा ब्याजदर कटौती गर्ने अपेक्षा बढेको छ । एजेन्सी
अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुद्धारा कैलालीका ठग्गुराम चौधरीलाई माघीमा सवा दुई लाख रुपैया सहयोग	१ माघ २०७६, बुधबार १७:०२
ड्यालसमा मनाइयो पृथ्बी जयन्ती	२९ पुष २०७६, मंगलवार ०१:०७
के हो MCC ? के अमेरिकी सेना नेपाल जानै लागेका हुन् त ? २२ भाद्र २०७६, आईतवार १५:०६
‘एमसीसी’बारे यस्तो छ अमेरिकी दूतावासको १० बुँदे प्रस्टोक्ति २२ भाद्र २०७६, आईतवार १५:०६
ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया शुरू : सहभागी सिनेटहरूलाई शपथ खुवाइयो २२ भाद्र २०७६, आईतवार १५:०६